सामाजिक सन्जालको प्रश्‍न: कहाँ छन् ज्याक मा ? - Shikhar Post Shikhar Post
सामाजिक सन्जालको प्रश्‍न: कहाँ छन् ज्याक मा ?
काठमाडौं । सार्वजनिक नजरबाट ज्याक मा हराएको दुई महिना बितेको छ । उनी निर्णायक रहेको टेलिभिजन शोको अन्तिम एपिसोडमा पनि नदेखिएका अलिबाबाका संस्थापकको असक्रियताले सामाजिक सन्जालमा प्रश्नैप्रश्‍न उठाएको छ ।
हङकङको द एसिया टाइम्सले पिपुल्ड डेलिलाई उद्धृत गरेर ‘सुपरिवेक्षण अँगालेको’ उल्लेख गरेको छ । चीन छाड्न ज्याकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । ज्याकले चिनको वित्त नियामकलाई ‘कठपुतली मानसिकता’ भएको भनेका थिए ।
सोही भनाइका आधारमा ३७ खर्बबराबरको संसारको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ निष्कासन रोकिएको थियो ।
– तस्बिर : ब्लुमबर्ग
प्रकाशित मिति : मंगलवार, २१ पुष २०७७ १७:४१